Yabelana ngeefayile ngokungaziwa neVolafile.lo | Iindaba zeGajethi
IVolafile.io yinkonzo yelifu enikezelwe kwabo banazo iifayile zokwabelana nabanye abasebenzisi, oku ngaphandle kwesidingo sokubhalisa idatha yakho, imeko eyahlulahlula kwezi ezifanayo apho, xa usenza iakhawunti echazwe kakuhle, ngumthetho ongenakuphepheka.
Umzekelo, ukuba unayo iakhawunti UGoogle onokusebenzisa iDrive, okanye Isibhakabhaka ukuba inkonzo ubhalise neMicrosoft; le mizekelo yokubamba ilifu ngobhaliso ikwabandakanya iDropBox okanye Mega, le yokugqibela inika i-50 GB yokugcina ngokukhululekileyo. Kunokuthiwa iVolafile.io isebenza "kubhabho", ngenxa yokuyilwa kwamagumbi apho nabani na anokungena khona ukuze asebenzisane, okwabelana okwethutyana ulwazi ngokungaziwayo.
Amaqela namagumbi okwabelana ngeefayile kwiVolafile.io
Mhlawumbi singakhumbula into eyayikho ngaphezulu kweminyaka elishumi eyadlulayo xa kwaqala amagumbi okuncokola kwi-Intanethi, apho umsebenzisi anokuthi angene kwezi ndawo ngenjongo yokuhlangana nabahlobo; kule meko, injongo yeVolafile.io kukwabelana ngamaxwebhu okanye iifayile, ukwazi ukuba yi-mp3, iifayile zevidiyo okanye nayiphi na into enokufuneka. Akukho mda okanye isithintelo xa ungena kula magumbi ukwabelana ngolwazi, kuba yinto engenamda nabani na anokwamkela kuyo. Ngoku, ezinye zezi fayile zinokujongwa kwangoko ukubona ukuba zinomdla kuthi okanye akunjalo, eziya kuthi zixhomekeke ikakhulu kuhlobo lwesikhangeli esisisebenzisayo, njengoko abanye benako vumela ukudlala kwefayile ye-mp3 okanye ukuboniswa komfanekiso okanye ukufota okwenyani. Kwimeko apho umkhangeli akalixhasi eli nqaku, umsebenzisi omenywe kuya kufuneka abeke emngciphekweni ukhuphelo lwento ekwabelwana ngayo apho, kufuneka aqhubeke ngendlela eqhelekileyo xa sifuna ukukhuphela ifayile kwi-Intanethi, okt, Sebenzisa imenyu yokuma yeqhosha lasekunene ngokukhetha ukhetho «gcina ikhonkco njenge«; ukuba iintlobo ezahlukeneyo zeefayile kwabelwana ngazo kwigumbi (ukongeza kwimultimedia), oku kunokuba luncedo olukhulu xa uzama ukufumana into enomdla kuthi.
Umzekelo, kunokubakho abasebenzisanayo abelana ngeefayile zevidiyo kunye nemifanekiso, iaudiyo (enokuba ngumculo), amaxwebhu okubhaliweyo, phakathi kwabanye. Ukuba imeko iboniswe ngoluhlobo kweli qela okanye kwigumbi, kuya kuyanconywa oko phezulu kukho ibha encinci yokukhetha, ziphi iindidi eziza kuchonga olu hlobo lweefayile.
Kuya kwanela kuphela ukuba ucofe nakweyiphi na indidi eboniswe kwibar ukuze ukwazi ukuncoma zonke ezo fayile ekwabelwana ngazo ngezi mpawu. Ukongeza kuyo, kwicala lasekunene lebha yecandelo esele silikhankanyile yinjinjini yokukhangela encinci, indawo apho kuya kufuneka sibhale kuphela igama levidiyo, iaudiyo, usetyenziso okanye uxwebhu apho sinomdla khona, sikwazi ukubonisa enye, ezininzi kwaye mhlawumbi kungabikho ziphumo kuxhomekeke kwinto ekwabelwana ngayo apho; Ukuba ligumbi okanye iqela elenziwe ngabasebenzisi abanomdla kwisihloko esithile, umphuhlisi wale nkonzo uVolafile.io ubone kufanelekile ukubeka iwindow eyongezelelweyo ukuze amalungu eqela akwazi ukunxibelelana; Ngesi sizathu, kwicala lasekhohlo lojongano sinokubona ukuba kukho icandelo elincinci lokuncokola, apho unokufumana khona uthethe neqela okanye nomsebenzisi othile, malunga nokufumaneka kolunye uhlobo lwamaxwebhu anomdla kuwo. .
Ngoku, ekuqaleni kwenqaku silikhankanyile le nkonzo luhlobo lokubamba okwethutyana efini, Into ebonakaliswa ngokupheleleyo ukusukela ukuba iifayile eziza kwabelwana ngazo kwiiseva zazo ziya kuba nobuninzi beeyure eziyi-12, yiyo loo nto, yakuba ibekho eyodwa, kufuneka ikhutshelwe. Ukongeza, ukuba kwabelwana ngefayile enkulu, kufuneka ubonelelo lwe-Intanethi ukuze ukhuphele oko kuyimfuneko, kuba ukuba amalungu aliqela anomdla wokukhuphela ifayile enye, inokuzalisa inkonzo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ungabelana njani ngeefayile kuGoogle Drive ngokulula, IMicrosoft isungule usetyenziso olusemthethweni lweSkyDrive lweWindows yeWindows 7 kunye ne-iOS, Inkonzo yokubamba iMEGA, kutheni uyisebenzisa phakathi kwabanye?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » IVolafile.io yabelana ngeefayile ngokungaziwayo nabanye abasebenzisi